Ingabe iDisney plus inaye uHarry Potter? - LifeBytes | I-LifeBytes
Ingabe iDisney plus inaye uHarry Potter?
I-Encarni Arcoya | 29/05/2022 20:27 | Kubuyekezwe ku- 31/05/2022 08:37 | Ubumnandi
Ngochungechunge oluningi nezinkundla zama-movie esinazo akunakugwemeka ukulahlekelwa umbono wokuthi singawabona kuphi amanye amafilimu esiwathandayo. Izinjini zokusesha zivame ukugcwala imibuzo mayelana nokuthi iDisney Plus inaye uHarry Potter, noma singabuka isizini yakamuva kaDokotela Who on Netflix.
Uma ungomunye walabo abafuna amafilimu kaHarry Potter futhi uyazibuza ukuthi ngabe iDisney Plus inawo yini, lapha uzothola impendulo. Nakuba ungase ungakuthandi.
1 I-Disney Plus: inayiphi ikhathalogi?
2 Ingabe i-Disney Plus inaye uHarry Potter?
3 Ngabe uHarry Potter uzoba kuDisney Plus ngokuzayo?
4 Ungabona kuphi futhi uHarry Potter?
5 Yini eyengeziwe ongayithola ku-HBO Max
6 Amafilimu afana noHarry Potter
6.1 I-Percy Jackson Saga
6.3 I-Upside Down Magic
I-Disney Plus: inayiphi ikhathalogi?
I-Disney Plus iyinkundla lapho ungathola khona amagugu amahlekokubili okwamanje nedlule. Mhlawumbe, kanye neNetflix, leyo enezigaba eziningi futhi ikuvumela ukuthi ubuke opopayi kodwa namanye amamuvi nezinhlobo.
Ekuqaleni, ngenxa yegama, kwakucatshangwa ukuthi kuzoba ngabantwana kuphela, kodwa iqiniso liwukuthi inokuningi okwengeziwe. Isibonelo, izingcezu ezimbili ezibalulekile iMarvel ne-Star Wars. Ngabo kuphela akwazi ukwengeza amamuvi amaningi, uchungechunge namadokhumentari amboza uhla olukhulu lwababukeli, futhi imidlalo yakhe yokuqala ivame ukukhiqiza intshisekelo enkulu.
Ngokuhambisana nalokhu unama-documentary, afana ne-National Geographic namanye adonsa amehlo ngokwenza osaziwayo ababalulekile.
Kancane kancane, ingeza okuqukethwe okwengeziwe kukhathalogi yayo, kanye nesiteji se-Star esifakwe ngaphakathi kwe-Disney. Ngakho, njengamanje ujabulela:
Zonke izinto ze-Disney: amamuvi, uchungechunge, izikhindi ezipopayi, okuhlanganisa ne-The Simpsons.
Pixar: ngamafilimu akhe aqale aphikisana neDisney futhi manje ayingxenye yawo.
Marvel: ngamamuvi, uchungechunge namadokhumentari okuthi enziwa kanjani.
I-star wars: futhi ngochungechunge namamuvi.
National I-Geographic: ngamadokhumentari.
Star: lapha uzothola kokubili amamuvi nochungechunge lwezithameli zabantu abadala.
Ingabe i-Disney Plus inaye uHarry Potter?
Iqiniso liwukuthi uma ubhalisele i-Disney Plus futhi ufuna ukubona amafilimu e-Harry Potter Siyaxolisa ukukutshela ukuthi ngeke kwenzeke. I-Disney ayinawo lawo mamuvi kukhathalogi yayo, futhi ayizange ibe nawo ngaphambilini., njengoba zingabonwa kuphela ku-Amazon Prime futhi, ezinye, ku-Netflix. Eqinisweni, awasekho kulawa mapulatifomu (i-Amazon Prime ingakuvumela ukuthi uqashe noma uyithenge).
Manje, Iqiniso liwukuthi wonke amafilimu kaHarry Potter, yonke i-saga, okuhlanganisa i-Fantastic Beasts ezimbili nokuthi ungazithola kuphi zigcinwe ngaphakathi kwekhathalogi ye-HBO Max. Ukuze uzibone, kuzodingeka ukuthi uye kule nkundla futhi ubhalise.
Ngabe uHarry Potter uzoba kuDisney Plus ngokuzayo?
Siqala ngesisekelo ongeke wazi. Kodwa namuhla, wonke amamuvi e-Warner awe-HBO Max futhi yilapho kuphela ozokwazi ukuwabona. Ngakho-ke, uma sigxila kudatha yamanje, iqiniso liwukuthi mancane amathuba okuthi i-Disney Plus ithole amalungelo e-Harry Potter ngokuzayo. Lokho akusho ukuthi ngeke kwenzeke, kodwa okwamanje asikuboni ukuthi kungenzeka.
Ungabona kuphi futhi uHarry Potter?
Ngaphambi kokuthi sikutshele ukuthi yonke i-saga kaHarry Potter iku-HBO Max, kodwa empeleni kunezindawo eziningi lapho ungayibona khona. Sikuklelisa wona uma kwenzeka ungenakho ukubhalisa kule nkundla:
Isitolo Play: Lapha ungathenga wonke amamuvi, nakuba ebiza kancane.
Apple: Ungawaqasha ngentengo engashintshi, nakuba ingenawo wonke amamuvi.
Youtube: Ku-Youtube nobabili ningawaqasha futhi niwathenge.
Amazon: Uhlelo lomqoqi olunamavidiyo angu-8 amafilimu nokunye okwengeziwe. Uma ungenayo i-HBO Max futhi uthanda lawa mafilimu, mhlawumbe inketho eshibhe kakhulu.
Yini eyengeziwe ongayithola ku-HBO Max
Uma ekugcineni unquma ukuthola i-HBO Max kufanele wazi ukuthi uzoba nokunye okwengeziwe abangeke bakunikeze kunoma iyiphi enye inkundla, futhi yinto abalandeli abangayithanda ngempela.
ENgoJanuwari 1, 2022, kwakhululwa idokhumentari ethi Harry Potter: Buyela e-Hogwarts, umhlangano wokugubha iminyaka engu-20 lapho abaningi abalingiswa be-saga beza khona, futhi babenomusa ngokwanele ukuveza ezinye zezimfihlo zabalingisi nefilimu eyayingaziwa.
Ngakho ngaphandle kwama-movie, uzoba nedokhumentari eyodwa ukuze ubone ukuthi abalingisi bashintshe kanjani nakho konke obekungaziwa ngefilimu.
Amafilimu afana noHarry Potter
Noma iDisney Plus ingenaye uHarry Potter, lokho akusho ukuthi ayinawo amamuvi angaqhudelana nesaga sewizadi. Eqinisweni, sincoma ezimbalwa:
I-Percy Jackson Saga
Kulokhu akayena umlingo, kodwa ungunkulunkulu futhi ngenxa yalokho kufanele aziqeqeshe futhi afunde, ngakho-ke sizophila izigigaba zabo ekamu lokuqeqeshwa konkulunkulu nezidalwa zemilingo.
kukhona amafilimu amabili kuphela, i-saga yama kodwa kunezincwadi eziqhubekayo nezigigaba zalo mlingiswa wesilisa nabangane bakhe.
Uma ukhule namakhosazana akwa-Disney kanye "nabathakathi ababi" babo uzoyithanda le saga. Empeleni kuwukuhlanekezela kwakudala, ngezingane zamakhosazana kanye nezimbi kakhulu.
Phakathi kwalabo ozothola kukhona indodana kaCruella de Vi, indodakazi kaMaleficent, indodana kaJafar noma indodakazi yendlovukazi embi ye-Snow White, Grimelda noma Grimhilde. Yebo, kuzoba khona nabahle, futhi njengoba bekhuluma ngesiteji ngale kwezinganekwane baba namaqiniso ngokwengeziwe.
I-Upside Down Magic
Lena akusiyo ifilimu eyaziwayo, kodwa iqiniso wukuthi nayo iwumlingo. Kuyo sithola i-protagonist engena ku-Sage Academy of Magic Training. Kodwa-ke, ngenxa yokungazinzi kwayo, intombazane yabelwe ekilasini le "reverse magic".
Manje njengoba uyazi ukuthi i-Disney Plus inoHarry Potter, into elandelayo ongazibuza yona ukuthi kufanelekile yini ukuba ne-HBO Max. Ikhathalogi yayo ayikakaqedi, kodwa iqiniso liwukuthi aliyona enye yamapulatifomu abiza kakhulu futhi maduzane yenza izinhlinzeko eziningi ezibalulekile (ukuba nayo phakade ngenani lentengo, isibonelo), elingaphinda liphindwe.
Indlela ephelele ye-athikili: LifeBytes » Ubumnandi » Ingabe iDisney plus inaye uHarry Potter?
Imodi yendiza: ukuthi iyini, ingeyani nokuthi isetshenziswa kanjani nokuyivala
Ungazi kanjani ukuthi ngiphumelele ithiyori